mairie-antananarivo – Hamafisina ny fanampian’ny CUA ny Hetsiky ny Fanovana
Hamafisina ny fanampian’ny CUA ny Hetsiky ny Fanovana
Mitohy ny tolona! Izay no nambaran’ny Filohan’ny Filankevitry ny Tanànan’Antananarivo (CUA), ny kolonely Faustin Andriambahoaka omaly, tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely. Hihamafy ny fitakiana etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mey hoy izy ka hanohy sy handray anjara mavitrika amin’izany ny Boriboritany rehetra eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Nilaza koa izy fa hamafisina ny atao hoe “Andrimason’ny Tanàna”izay hanarahana maso akaiky ny eto Iarivo mba hametrahana fandriampahalemana izay azo antoka manoloana izao fiainam-pirenena manahirana izao.
Hatramin’ny niandohan’ny tolona teo amin’ny kianjan’ny 13 Mey izay notarihan’ny Solombavambahoaka ho an’ny fanovana dia nanohana hatrany ny Tananan’Antananarivo. Hatramin’izao dia maro ny olana tsy mbola voavaha noho izany dia tsy hoafaka handeha lavitra io Governemanta io. Notakiana ny tsy hisian’ireo Ministra efa tao anatin’ny Governemanta Mahafaly intsony kanefa dia mbola marobe izy ireo no ao anatin’ny Governemanta Ntsay.
Ankoatra izay dia nanambara ny Filohan’ny Filankevitry ny Tanàna Faustin Andriambahoaka fa raha ny Lisim-pifidianana amin’izao fotoana izao no entina miatrika fifidianana dia tsy hisy raharaha vanona satria betsaka ny lesoka, toy izany koa ny Sefo Fokontany izay tokony ho fidian’ny fokonolona mivantana izay tsy tokony handaniana fotoana lava na fanaovana izany, ny CENI koa hoy izy dia mila jerena satria maro ny fanakianana.